Izimangaliso Zemvelo Ezinhle Kunazo zonke eNingizimu Melika
Izindawo Central & South America
Izimangaliso Zemvelo ZaseNingizimu Melika
Ungazi izimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba kodwa wazi izimangaliso zemvelo eNingizimu Melika. Lesi sifunda sinamabonakude amaningi kakhulu wezwe, izilwane zasendle, ukuma komhlaba kanye nezimangaliso zemvelo ukuthi kunzima ukunciphisa uhlu kulabo abakhangayo kuphela, ezindaweni eziphezulu zaseNingizimu Melika.
UJese Kraft / EyeEm / Getty Izithombe
Mhlawumbe owaziwa kakhulu ngezimangaliso zemvelo eNingizimu Melika. I-Galapagos ibizwa ngokuthi i-laboratory enkulu kunazo zonke yokuphila emhlabeni. Iziqhingi eziphakathi kwemifudlana emibili ebandayo zixhasa uhlobo oluhle lwezilwane zasendle eziye zaba izakhiwo ezintsha ezifana ne-iguana olwandle kanye ne-airless cormorant, izinhlanzi ezinkulu zasolwandle, kanye nezilwane zasolwandle nama-penguin kude nemikhaya yazo yasekuqaleni.
davidluna / Getty Izithombe
Amadwala namawabe akha ama-tepuis ayedlule isikhathi eside ngaphambi kokuba izwekazi laseNingizimu Melika lihlukaniswe ne-Afrika. Manje basekhaya emahlathini emvula, amafu emfucumfucu kanye nezinhlobo ezinkulu ze-sandstone. Kusukela phezulu kwesinye, umfudlana wamanzi ongapheli uthatha amasekhondi ayishumi nane ukuwa phansi.
I-Angel Falls ingenye yezingosi ezidume kakhulu eVenezuela futhi kufaneleka kakhulu kwezimangaliso zemvelo eNingizimu Melika.
I-BRUSINI Aurlien / hemis.fr / Getty Images
Ihlathi lase-Amazon aliyona izwe elilodwa kuphela eNingizimu Melika kodwa lihamba ngePeru, eBolivia, Venezuela, eColombia, e-Ecuador naseBrazil.
Ukudweba isiteshi esikhulu ngokusebenzisa amahlathi emvula okuyizinhlobo zezilwane eziningi zasendle kunanoma yikuphi okunye emhlabeni, umfula i-Amazon uhamba ngamamitha angaphezu kuka-4000 kusukela othomeni waya e-Atlantic lapho kuthi, ngomzuzwana owodwa, uthele amanzi angaphezu kwezigidi ezingu-55 ulwandle.
I-basin e-Amazon ihlanganisa okungaphezu kwezingxenye ezimbili nesikhombisa zomhlaba waseNingizimu Melika.
Lesi chibi esiphezulu se-altitude, esingaphezu kwamamitha angu-12 000 ubude futhi angaba ngu-900 ububanzi, lesi yisichibi elikhulu kunazo zonke eNingizimu Melika. Njengoba kunendawo engamamitha angu-3200 ubude, amakhilomitha angu-122 ubude nobubanzi obuphakathi kwamamitha angu-35, neziqhingi ezingu-36, leli chibi libhekwa njengelwandle eliphakeme kunazo zonke emhlabeni.
ricardomartinez / Getty Izithombe
Eyaziwa ngokungahambi kahle njengenhlama eyingozi kunazo zonke emhlabeni, lo mgwaqo omncane wogwadule olusogwini olwandle luya empumalanga ye-Andes futhi luhlanganisa ukugeleza kwemifula, izimbiza zamanzi, iziphethu ezishisayo nesihlabathi esingaba ngamamitha angu-600 eningizimu ukusuka emngceleni waseChile nePeru. Indawo engabi nendawo yokungaxoleli iyisizathu sokuhlola indawo.
Lesi sifundazwe asisoloko somile, empeleni ngonyaka odlule kwahlushwa izikhukhula ezinkulu. Kodwa lihlala linye yezinto ezinhle kakhulu eNingizimu Melika.
UHelinadia / Getty Izithombe
I-Andes iyisimiso esincane sezintaba, esingaba ngamamitha angu-4500 ukusuka emantabeni asenyakatho kuya empumalanga yeTierra del Fuego. Ama-volcanos aphilayo avule i-stretch futhi ayingxenye yePacific Rim of Fire. E-Peru naseBolivia, ama-Andes aphakama emigqeni ehlukene ehlukaniswe izigodi ezisekela amapulazi namadolobha. Inqwaba enkulu i-Aconcagua emngceleni we-Argentina ne-Chile. Kubonakala lapha: Cerro Fitzroy ePatagonia yase-Argentina .
I-Lake District / Patagonia
Jami Tarris / Getty Izithombe
I-Patagonia e-Argentina naseChile inamakhasela amakhulu, ama-volcano, amachibi ase-glacier, kanye nemifula esheshayo. Izikhukhula ezinjenge-Osorno eChile, i- Perito Moreno Glacier e-Argentina kanye nama-fjords amahle aseChile yizo zonke izikhumbuzo zezimangaliso zemvelo. Kubonakala lapha: I-Glacier National Park, e-Argentina
UMichael Leggero / Getty Images
Amasentimitha angu-28,470 ngobukhulu, ahlukaniswe nensika engaseningizimu yezwe laseNingizimu Melika yiStrarait of Magellan, iTerra del Fuego kubanda, kumoya futhi kuyingozi.
U-Grant Ordelheide / Getty Images
Ukuwa kwamanzi amaningi, okwakhiwa lapho umfula iParana wehla phakathi kuka-197 no-262 kuya emfuleni ongezansi, kube cishe ukugeleza kwamanzi okuqhubekayo lapho umfula ugijima phezulu.
Steven House Photography / Getty Izithombe
Isilwane esivela olwandle lwaseCaribbean, leli libi elikhulu kakhulu eNingizimu Melika, eliqhele ngamamitha angaba ngu-100 ubude namamitha angu-75 ububanzi. I-Lake Maracaibo yakhiwa kusukela odakeni ibeka izigidi zeminyaka edlule futhi manje ibona ama-petroleum amasheya amakhulu.
Okufanele Ukwenze Uma iPhasipoti Yakho Idliwe eNingizimu Melika
Ukuhamba kweJacada: Ukuvakashelwa Okunethezeka Okuzimele Okuhlelwe Ngu-Insiders
I-Delta yaseTigre - I-Wonderland yamanzi aseTropical Water
7 Amanzi Amanzi Okumele Uwabone eNingizimu Melika
Ukuphi Ukuthola Cowboys eNingizimu Melika
Ibhola (ibhola) e-Afrika
I-Markrelle IX yeKreuzberg
Imisebenzi emikhulu yezinsuku zeRaily Houston
Izimakethe Zemikhumbi YeVermont
I-Big Chicago 10: Izindawo ezihamba phambili zezingane ezincane
Ukuqhathanisa ama-Hitches: Ukushaya kwe-Bumper Hitler vs. Hitos Goecken
I-US Virgin Islands (USVI) Umhlahlandlela Wokuhamba
Izinto Eziphezulu Okuzokwenziwa Ngo-March eSt. Louis
Izindawo zokudlela ezinganeni ezinomngane e-New York City
5 Izindawo Ongazange Uzithole Zingabangani Bomndeni
Amathikithi aseMyuziyamu naseMibonweni e-Italy
I-Cable Car Tour yaseSan Francisco
Ukuthola Izingosi Zomhlaba Okumnyama Ezisezinkanyezi eNew Mexico